အိမ်ကမိန်းမကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား ၁ ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် …။ ကျွန်တော့်ဇနီး ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အိမ် ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော် ပြောလိုက်တယ် …။ “မင်းကိုငါ ပြောစရာရှိတယ်” သူကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ထိုင်နေပြီး ညစာစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်မှုကို မြင်နေရပါတယ် …။ ကျွန်တော်ဘယ်က စပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာတွေ တွေးနေတယ် ဆိုတာကို သူ့ကိုပြောရမှာပါ …။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကွာရှင်းဖို့ ကိစ္စပေါ့။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ကျွန်တော်စပြောခဲ့တယ် …။ သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့ ကျွန်တော့်စကားလုံးတွေ ကို …
ရွှေဝတ်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ…
ရွှေဝတ်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ… ရွှေဆိုတာ ရှေးယခင်ခေတ်တည်းက တန်ဖိုးထားပြီးဝတ်ဆင်သုံးစွဲခဲ့ကြတဲ့ အရာပါ။ ဘုရင်ခေတ်ကဆို အသုံးအဆောင်တွေမှာပါ ရွှေနဲ့ချည်းပဲ သုံးခဲ့ကြတာ၊ အဝတ်အထည်တွေမှာပါ ထည့်သွင်းရက်လုပ်ကြပါတယ်။ ရွှေကို အလှအတွက်တင်မကဘဲ ဆေးကုမှုအနေနဲ့ပါ အသုံးပြုကြတယ်ဆိုတာရော သင်သိရဲ့လား။ မျက်နှာရွှေသွင်းတယ်ဆိုတာတော့ ကြားဖူးမှာပေါ့။ ဒီလိုပါပဲ ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် ကုထုံးတချို့မှာ ရွှေကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနေကြတာတွေ ရှိလာပါပြီ။ အခုပြောပြမှာကတော့ ရွှေထည်ဝတ်ဆင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုထုံးမှာ ပါဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လူ့ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ရွှေက ဘယ်လိုကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုနေသလဲ (၁) အဆစ်ရောင်လက္ခဏာတွေကို သက်သာစေတယ် ရွှေက လေးဘက်နာအဆစ်ရောင်ရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကို သက်သာလျော့ပါးစေနိုင်လို့ ကုသရေးမှာအသုံးပြုကြတာပါ။ အရေပြားမှာ ထိကပ်ပြီး ရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာတွေဝတ်ဆင်ရုံနဲ့ ဒီဝေဒနာခံစားရတာတွေကို …
ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများ အတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း
ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများ အတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း ခေါင်းသိပ်ကိုက်လျင် (ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများ အတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးပါ) နည်းလေးက အမှန်လွယ်သလို တကယ်ပဲ ထိရောက်ပါသည်။ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်စရာလည်း မလိုပါ။ လူတိုင်း လက်တွေ့ စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းပါ …။ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ပါက ကြက်သွန်ဖြူ တစ်ဥ၊ တစ်မွှာကို ခွာပြီး ထုထောင်းပါ ပြီးလျင် စက္ကူပါးလေးတွင် အစေးကိုသုတ် လိမ်းပြီး ခေါင်းကိုက်သည့် နားထင်ဘက်တွင် ကပ်ထားလိုက်ပါ …။ ခေါင်းနှစ်ခြမ်းစလုံး ကိုက်ပါလျင် နားထင် နှစ်ဘက်လုံးကို စက္ကူပါးလေး ကပ်လိုက်ရုံပါပဲ ။ ချက်ချင်းကို ချွေးတွေပွင့် ထွက်လာပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဝေဒနာ …
မိန်းမတွေကိုလိမ်ရင် နောက်ဆုံးမှာ လိမ်တဲ့ယောကျာ်းတွေပဲ နောင်တရ ရတာပါ
မိန်းမတွေကိုလိမ်ရင် နောက်ဆုံးမှာ လိမ်တဲ့ယောကျာ်းတွေပဲ နောင်တရရတာပါ ယောကျာ်းတွေအများစုဟာ တစ်ခုခုဆို သူတို့ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်မသိအောင် လုပ်လိုက်မဟဲ့ဆိုပြီး လိမ်တတ်၊ ဘတ်တတ်ကြပါတယ် …။ သူတို့ ဒီလိုလိမ်တာကိုလည်း မိန်းမတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ အဟုတ်ကြီး ထင်နေတတ်ပါတယ် …။ တကယ်တမ်းတော့ မိန်းမတွေဆိုတာ လိမ်ဖို့ဘတ်ဖို့လုံးဝမလွယ်တဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ကို လုံးဝမလိမ်သင့်ဘူးဆိုတာ ဒီိအကြောင်းရင်းတွေ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၁) လူကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အမှန်ပြောနေတာလား လိမ်နေတာလားသိနိုင်တယ် သင့်ရဲ့ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် ဇနီးက သင့်အပေါ် သံသယစိတ်နဲ့တစ်ခုခုကိုမေးလာတဲ့အခါ လိမ်ပြောဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။ သူတို့တွေ သံသယဝင်တယ်ဆိုကတည်းက သင့်မှာသံသယဖြစ်စရာအနေအထားမျိုးတွေတွေ့နေရလို့ဖြစ်ပြီး..။ ပါးစပ်ကနေထုတ်မေးလာပြီဆိုရင် သူတို့မှာ သိထားတာတစ်ခုခုရှိနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ သင့်ရဲ့လေသံနဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကိုကြည့်ပြီး သင်လိမ်နေတာလား၊အမှန်ပြောနေတာလားဆိုတာ တန်းသိနိုင်ကြပါတယ်..။ (၂) …
Vaseline ကိုသုံးပြီး ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၄)ခု
Vaseline ကိုသုံးပြီး ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၄)ခု Vaseline က အသားအရေကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးတယ်၊ အသားအရေ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ပျိုမေတို့သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်အတွက် ဘယ်လိုအသုံးဝင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ သိပ်မသိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆံပင်တွေကျွတ်တာ၊ ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတာ၊ ကျိုးကြေ နေတာနဲ့ အဖျားတွေကွဲနေတာစတဲ့ ပြဿနာတွေကို Vaseline ကို အသုံးပြုပြီး ကုသလို့ရပါတယ်။ ဒါဆို ဆံပင်အတွက် Vaseline ကိုအသုံးပြုရမယ့် နည်းလေးတွေကို အခုပဲ ကြည့်လိုက်တော့နော် …. (၁) ဗောက်ပျောက်ဖို့ ဗောက်တွေအရမ်းဆိုးနေရင် Vaseline နဲ့ဦးရေပြားအနှံ့ခပ်ပါးပါးလေးလိမ်းပေးပြီး ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်နှိပ်နယ်ပေးပြီး ခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဗောက်ပျောက်ချင်တဲ့သူတွေအ နေနဲ့ Vaseline ကို ဦးရေပြားမှာပဲလိမ်းရမှာဖြစ်ပြီး ဆံပင်တွေမှာ …
နေ့စဉ်အလုပ်သွားနေရ၍ အချိန်မရသူများအတွက် ဘုရားတရားကို ဤသို့ပြုလုပ်ရန်
နေ့စဉ်အလုပ်သွားနေရ၍ အချိန်မရသူများအတွက် ဘုရားတရားကို ဤသို့ပြုလုပ်ရန် နေ့စဉ်အလုပ်သွားနေရ၍ အချိန်မရလို့ ဘုရားတရားမလုပ်နိုင်ပါဟု ပြောလာသူများအတွက်ပါ။ နံနက် မိမိမူလအိပ်ရာထချိန်ထက် နာရီဝက် စော၍ ထပါ။ ငါးပါးသီလ ခံယူပါ။ မိမိအဆင်ပြေရာ ဂါထာတစ်ခုခုကို ပုတီး စိတ်ပါ။ ပရိတ်တော်များအားလုံး မရွတ်ဖတ်နိုင်လျင် မိမိအဆင်ပြေရာသုတ်တစ်ခုသာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။ ည အလုပ်မှပြန်လျင် ည 9နာရီနောက်ပိုင်း ပရိတ်တော်များ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။ သောက်တော်ရေချမ်းများ ကပ်လှူပါ …။ ဆီမီးအလင်းတိုင်များ အမွှေးတိုင်များ လှူပါ။ ဂါထာတော်များ ရွတ်ဖတ် ပုတီးစိတ်ပါ။ လကုန်လျင် မိမိလစာထဲမှ ငွေကို လှူရန်အတွက် သီးသန့်ဖယ်ထားပါ။ ဘုရားပန်း 1 စည်းဖြစ်စေဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ လစာထဲမှ ဦးဦးဖျားဖျားဝယ်၍ လှူပါ။ …
ကံ အရမ်းနိမ့်လို့ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေတာ ကြုံရတဲ့အခါ ဒီလိုလုပ်ပါ
ကံ အရမ်းနိမ့်လို့ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေတာ ကြုံရတဲ့အခါ ဒီလိုလုပ်ပါ မြန်မာ့ရိုးရာနည်းစစ်စစ် ဖြစ်ပြီးတော့ ဆရာစဉ်ဆက် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အစွမ်းထက်ယတြာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကံဇာတာဂြိုလ်စီးလို့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျနေတဲ့ သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အလွယ်အကူဆုံးနဲ့ အထက်မြက်ဆုံး သမားစဉ် ယတြာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ မငြင်းနိုင်ပါဘူး …။ စီးပွားရေးမှာ ဒေဝါလီခံထားရပြီး ချူးတစ်ပြားမှမရှိ ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့အခါ၊ လူမှုရေးမှာ မိတ်ဆွေတွေအထင်အမြင်လွဲ ခိုက်ရန်ဖြစ် စကားတွေများ ကိုယ်ဘယ်လောက်အကောင်းလုပ်လုပ် အကောင်းမြင်မခံရပဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲလို ခံစား အထီးကျန်နေရတဲ့အခါ …၊ ကျမ်းမာရေးမှာ သေလုအောင်ရောဂါသည်း ဝေဒနာတွေ ခံစားနေရတဲ့အချိန် ဒီကိုယ်ထားကိုယ်စားယတြာကို လုပ်ပေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော် …။ “ယတြာပြုလုပ်နည်း” လုပ်မယ်ဆိုရင် ကာယကံရှင်ရဲ့ နံသင့် အသားသစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကို ကာယကံရှင်ရဲ့ အရပ်နဲ့တိုင်းဖြတ်ပါ …။ …
သေပြီးသား လူတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်ကနေ ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံ (၇)မျိုး
သေပြီးသား လူတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်ကနေ ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံ (၇)မျိုး ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါ သူတို့ကို သတိရတဲ့စိတ်ကတော်တော်နဲ့ မလျော့သွားပါဘူး။ ပြီးတော့ သေဆုံးပြီးတဲ့သူက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူတွေကို အိပ်မက်ပေးပြီး ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတတ်ကြတယ်လို့လည်း ယူဆတတ်ပါတယ် … ။ တကယ်ရော အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိပါ့မလားဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ဆုံးပါးသွားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားလာရင် ဒီအချက်လေးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်ပါတယ်နော် …. ။ (1) အိပ်မက်ကနိုးလာချိန်မှာတစ်ယောက်ယောက်စိုက်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ် ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပေမယ့် သူတို့တွေကိုယ့်အနားမှာရှိနေတုန်းပဲလို့ စိတ်ထဲကနေထင်နေတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ညအိပ်တဲ့အခါ သူတို့ကိုအိပ်မက်မက်ပြီး လန့်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ ဘေးနားကနေ တစ်ယောက်ယောက်ကြည့်နေသလို ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာက သူတို့တွေ သင့်ကိုအိပ်မက်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေလို့ပါတဲ့။ (2) …
ယနေ့မှာတော့ တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး၃လုံးစားပေးခြင်း ဖြင့်ရရှိမည့် အကျိူးကျေးဇူးလေးရေးပေးပါရစေ …
နံနက်စာ မစားဖြစ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒါတွေဖြစ်လာပါတယ်
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာကို လွန်စွာခံစားနေရသော ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်တယ်နော်…
Total Users : 441988
Total views : 1699519